ဂျပန် Confectioneries (Wagashi) | Experience Japan
› ဘလော့ Myanmar › ဂျပန် Confectioneries (Wagashi)
ဂျပန် Confectioneries (Wagashi)
Wagashi မကြာခဏအစိမ်းရောင်လက်ဖက်ရည်နှင့်အတူတာဝန်ထမ်းဆောင်လျက်ရှိသောရိုးရာဂျပန်သကြားလုံးဖြစ်ကြသည်။ သူတို့ကအများအားဖြင့် bean ကိုငါးပိနဲ့အသီးအပွနှင့်ဖွဲ့နေကြသည်။ Wagashi သကြားလုံးအရောင်များ, ပုံစံမျိုးစုံ, ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံနှင့်ပါဝင်ပစ္စည်းများတစ်အကွာအဝေးအတွင်း လာ. , အချို့ဂျပန်အချို့ရာသီသို့မဟုတ်တိုင်းဒေသကြီးများတွင်သာရရှိနိုင်ပါသည်။ တစ်ခုချင်းစီကိုချိုမြိန်တစ်ဦးကွဲပြားခြားနားပြင်ဆင်မှုနည်းလမ်းနှင့်ကိုက်ညီမှုရှိပါတယ်။
Wagashi နှစ်ပေါင်းရာချီများအတွက်ဂျပန်ယဉ်ကျေးမှု၏အရေးပါသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါပြီ။ နောက်ကျောရှေးဂျပန်, သစ်သီးများနှင့်အခွံမာသီးထဲမှာသူတို့ကိုယ်သူတို့အတွက် confectionery စဉ်းစားခဲ့ကြသည်။ ယင်းနရာကာလအတွင်းမှာတော့ (710 – 784 အေဒီ), တရုတ်ထံမှသြဇာလွှမ်းမိုးမှုချိုမြိန်ရယူထားသောသို့ဆနျစပါး၏အပြောင်းအလဲနဲ့ကိုမြင်တော်မူ၏။ Mochi (ပျော့ဆန်ကိတ်မုန့်) နှင့် dango (ဆန်ဖက်ထုပ်) ဒီခေတ်ကနေအစပြုနှင့်အဓိကအားဖြင့်ဘာသာရေးအခမ်းအနားများအတွက်အသုံးပြုခဲ့သည်နှစ်ဦးစလုံး။ သကြား 1350 အေဒီပတ်ပတ်လည်ဂျပန်ဖို့အဓိကတင်သွင်းဖွစျလာတဲ့အခါဂျပန် confectionery အစဉ်အမြဲပြောင်းလဲပစ်ခဲ့ပါတယ်။ သကြားပင်၎င်းတို့၏ဒူအစားအစာအချို့ကိုမျှဝေသူကိုပေါ်တူဂီကုန်သည်များထံမှလာ၏။ ပေါ်တူဂီသကြားလုံး nanbangshi အဖြစ်လူသိများခဲ့သည်အရာကိုပြောင်းလဲခဲ့ကြသည်။ ကြောင့်သကြားဓာတ်မြင့်မားတဲ့စရိတ်နဲ့ရာသီအလိုက်အသီးအပွဖို့, confectionery အဆိုပါ nobility နှင့်အထက်တန်းလွှာအဘို့သိုထားခဲ့ပါတယ်။ ဒဏ်ငွေ wasambonto သကြားမှကုန်ကြမ်းသကြားသနျ့၏ဖြစ်စဉ်ကိုထွင်းထုခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်သောအခါဤဖြစ်ခဲ့သည်။ သကြားလျော့နည်းစျေးကြီးဖြစ်လာခဲ့သည်နှင့်ထိုကဲ့သို့သောလက်ဖက်အခမ်းအနားအဖြစ်မြင့်မြတ်သောအတှေ့အကွုံမြား၏ကျော်ကြားမှုကိုပိုမိုကလူသည်ဤခဲဖွယ်စားဖွယ်စားရန်တတ်နိုင်နိမ့်အတန်းမှပိုပြီးလက်လှမ်းဖြစ်လာခဲ့သည်။ အဖြစ် ဤသည်အထူးသဖြင့်ကျိုတိုမြို့, နူးညံ့သိမ်မွေ့သောနှင့်နှစ်သက်ဖွယ်ဒီဇိုင်းများနှင့်အတူ confectionery အောင်များအတွက်စျေးကွက်ဖန်တီးခဲ့သည်။ ပိုပြီးဥရောပကုန်သည်များမေဂျီကာလအတွင်းရောက်လာသောအခါ, အနောက်တိုင်းမုန့်နှင့် lollies မိတ်ဆက်ခဲ့ကြသည်။ ဒါဟာဂျပန်သကြားလုံးကိုတရားဝင် wagashi အဖြစ်လူသိများဖြစ်လာခဲ့သည်သောဤအချိန်ကာလအတွင်းဖြစ်ခဲ့သည်။ wagashi အောင်၏အလေ့အကျင့်ရိုးရာပါဝင်ပစ္စည်းများနှင့်ချက်ပြုတ်နည်းလမ်းများနှင့်ခေတ်မီနည်းစနစ်များနှင့်စတိုင်များအရောအနှောတွေနဲ့ယနေ့ဆက်လက်သိရသည်။
•:Daifuku သေးငယ်တဲ့ဘောလုံးကိုပုံသဏ္ဍာန်၌နေသောစိုစှသကြားလုံး။ သူတို့ကအပျော့ဆန်ကိတ်မုန့်သို့မဟုတ် Mocha ၏လုပ်နေကြသည်။ သူတို့ကများသောအားဖြင့်ချိုမြိန် bean ကိုငါးပိသောအဆာရှိသည်။ သူတို့ကအတူတကွကပ်ထဲကနေသူတို့ကိုစောင့်ရှောက်ရန်အာလူးကစီဓါတ်ပါတဲ့အလင်းဖုန်မှုန့်နဲ့ဖုံးလွှမ်းလျက်ရှိသည်။ လူကြိုက်များ daifuku မူကွဲစတော်ဘယ်ရီ, ချိုမြိန် bean ကိုများနှင့်ရေခဲမုန့်တို့ပါဝင်သည်။ Daifuku left လျှင်သူတို့ခက်ခဲတဲ့ဖြစ်လာအဖြစ်ဝယ်ယူအဖြစ်ထိုနေ့ကိုစားရပါမည်။
•:Dango ဒီဂျပန်ရဲ့အများဆုံးချစ်ရာသခင်သည်နှင့်ကျော်ကြားသော wagashi ဖြစ်လိမ့်မယ်။ သူတို့ကပေါင်းဖြစ်ကြောင်းဆန်မုန့်ညက်ကိုဖန်ဆင်းသေးငယ်တဲ့ဖက်ထုပ်ဖြစ်ကြသည်။ သူတို့ကပုံမှန်အားဖြင့်တစ်ချောင်းကိုသုံးခုသို့မဟုတ်လေးခု skewered နှင့်တစ်ဦးချိုမြိန်ငံပြာရည်သို့မဟုတ် bean ကိုငါးပိနှင့်အတူထိပ်ဆုံးတာဝန်ထမ်းဆောင်နေကြသည်။ Dango မုန့်စိမ်းနှင့်အတူ coated ဘာပေါ် မူတည်. များစွာသောအရသာမူကွဲများတွင်ထံသို့လာကြ၏။ ဤရွေ့ကားဖက်ထုပ်တစ်ခါတစ်ရံသည်အခြားအချိုပွဲသို့ဆက်ပြောသည်နေကြသည်။ ဒီအပြင်လည်းကျဲပါးချက်ပြုတ်မတိုင်မီပဲပိစပ်ဆော့စ်နှင့်အတူ coated ထားတဲ့ငန် dango ဖြစ်ကြသည်။
•Dorayaki: – Patti ကဲ့သို့ချိုမြိန် bean ကိုငါးပိအဆာနဲ့လုပ်ထားတဲ့တစ်ဦးက confectionery နှစ်ခု pancake အကြားကိုဖိလေ၏။ မော်ဒန်မူကွဲထိုကဲ့သို့သောကြာပွတ်မုန့်, custard မုန့်နှင့်အစိမ်းရောင်လက်ဖက်ရည်အရသာမုန့်ကဲ့သို့သောအခြားဖြည့်ပါ, မဆံ့ဖြစ်နိုင်သည်။
•Higashi: သေးငယ်တဲ့အသွင်သဏ္ဌာန်, အစဉ်အလာတစ်စတုရန်းသို့ပုံသွင်းထားပြီးကြောင်းတစ်ဦးကခြောက်သွေ့တဲ့ချိုမြိန်။ ဒါဟာဆန်မုန့်ညက်, ကစီဓါတ်များနှင့် wasambonto သကြားနှင့်ဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ သင်၏နှုတ်၌ထားသောအခါပျော်အတိုင်းဤချိုမြိန်ခံစားသည်။ ဒီချိုမြိန်၏အတော်များများကထုတ်လုပ်သူများသောအားဖြင့်ဘောငျကိုဝယ်ယူနိုင်ပါသည်သောဤချိုမြိန်၏ငါးကွဲပြားခြားနားသောအမျိုးအစားများကိုဖြစ်စေမည်။ တစ်ခုချင်းစီကိုကွဲပြားခြားနားသော Higashi ဟာကံကောင်းအရေအတွက်ကငါးသင်္ကေတမှရွေးချယ်ဖို့တစ်ဦးကွဲပြားခြားနားအရသာ, အရောင်နဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ရှိလိမ့်မယ်။
•Manju: တစ် bean ကိုငါးပိသို့မဟုတ်အခြားချိုမြိန်အဆာနှငျ့ပွညျ့စုံကွောငျးတစ်ဦးကသေးငယ်တဲ့ Bun ။ ဤရွေ့ကားများသောအားဖြင့်ပေါင်းသို့မဟုတ်ဖုတ်ခံရသဖြင့်ချက်ပြုတ်နေကြသည်။ သူတို့ကပထမဦးဆုံးအချောမွေ့ပြင်အလွှာနှင့်အတူတစ်စက်ဝိုင်းပုံသဏ္ဌာန်နေကြတယ်, ဒါပေမယ့်အမျိုးမျိုးသောပုံစံမျိုးစုံအတွက်မီးဖုတ်ထားသောဗားရှင်းကပိုခေတ်စားလာတယ်။ ဆုံးအသိအမှတ်ပြု manju ပုံသဏ္ဍာန်ငါးသောကွောငျ့ဖွစျသညျ။
•Monaka: နှစ်ခုန့်ကိုအကြားဖိ adzuki bean ကိုဖြည့်ထားတစ်ဦးက confectionery ။ ဤရွေ့ကားကောက်ညှင်းကနေဖန်ဆင်းတော်နှင့်တစ်ဦးယိုနဲ့တူသရုပ်ဆောင်အတွင်းရှိ bean ကိုဖြည့်နှင့်အတူတစ်သားညှပ်ပေါင်မုဖန်တီးနေကြသည်။ Monaka ပုံမှန်အားဖြင့်ထိုကဲ့သို့သောချယ်ရီပန်းတွေ, chrysanthemums နှင့်ဇီးသီးပွင့်အဖြစ်ပန်းပွင့်တွေရဲ့ပုံစံမျိုးစုံသို့ပုံသွင်းနေကြသည်။ ဤအများသောအားဖြင့်အောင်ပွဲခံဖြစ်ရပ်များမှာကိုစားနေကြသည်အဖြစ်အများအပြားအလွန်ကျော်ကြား monaka အထူးပြုစတိုးဆိုင်များဂျပန်တွင်ရှိပါတယ်။
•Namagashi: အဲဒီသကြားလုံးသူတို့ကျော်ကြားသောဂျပန်လက်ဖက်အခမ်းအနားတွင်စားပုံမှန်ချိုမြိန်ဖြစ်ကြသည်အဖြစ်စျေးအကြီးဆုံးနဲ့ရောင်စုံရှိပါတယ်။ သူတို့ကပန်းပွင့်, အရွက်, အသီးနှင့်အလိမ်အပါအဝင်ပုံစံမျိုးစုံတစ်အကွာအဝေးအတွင်းလုပ်နေကြသည်။ သူတို့မုန့်ညက်, ကြက်ဥ, ပဲနှင့်သကြားများပုံမှန်ပါဝင်ပစ္စည်းများဝေမျှနေစဉ်, သူတို့ကတခြား wagashi သကြားလုံးထက်ပိုမိုပျော့ပျောင်းနှင့်ပျော့ဖြစ်ကြသည်။ သူတို့မီးဖုတ်ထားသောမဖြစ်သကဲ့သို့သူတို့တစ်တွေ ” စိုစွတ်သောချိုမြိန် ” စဉ်းစားနေကြပါတယ်လို့ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့အထဲမှာအသီးဂျယ်လီသို့မဟုတ်ဒူ bean ကိုငါးပိရှိသည်။ သူတို့လေးယောက်ရာသီ၏ကြော့နှင့်ကရုဏာမြင်ကွင်းများထုတ်ဖော်ပြောဆိုဖို့ဒီဇိုင်းရေးဆွဲနေကြပါတယ်။ namagashi ၏အမျိုးပေါင်းအတော်လေးမှန်မှန်ပြောင်းလဲသွားမအဖြစ်မကြာမီသူတို့ဝယ်နေကြတယ်အဖြစ်ကိုစားရပါမည်။
•Oshiruko: အပူသို့မဟုတ်မျြးစိမျ့စိမျ့ဖြစ်စေခံစားနိုင် wasambonto သကြားနှင့်အတူ adzuki ပဲမျိုးစုံတကျီကျီဖွငျ့တစ်ဦးကချိုမြိန်ဟင်းချို။ အဆိုပါဟင်းချိုတစ်တောက်ပချောမွေ့ texture နှင့် mellow အရသာရှိပါတယ်။ ဒါဟာပုံမှန်အားဖြင့်အရည်၏ထိပ်ပေါ်မှာ dango နှင့်အတူတာဝန်ထမ်းဆောင်နေသည်။ ဤရွေ့ကားချိုမြိန်ဆန်မုန့်ညက်ဖက်ထုပ်ဖြစ်ကြသည်။
•Taiyaki pancake Battery ကိုဆင်တူ Battery ကိုဖန်ဆင်းငါး-shaped မုဖြစ်ကြပြီးအစဉ်အလာချိုမြိန် bean ကိုငါးပိနှင့်ပြည့်စုံပြီ။ ပေမယ့်ပိုပြီးမကြာသေးမီကဖြည့်ပါ custard မုန့်, ချောကလက်သို့မဟုတ်ဒိန်ခဲများပါဝင်သည်။ အဆိုပါ Battery ကိုနေဆဲ crispy အခါ Taiyaki အကောင်းဆုံးကင်ကိုချွတ်ပူကိုစားနေကြသည်။
•Yokan: ချိုမြိန် wagashi ၏ရှေးအကျဆုံးအမျိုးအစား။ ဒါဟာမှောင်မိုက်အရောင်ပေးသော adzuki ပဲမျိုးစုံ၏ထွက်လုပ် gelled ချိုမြိန် bean ကိုငါးပိ, တစ်ဘားဖြစ်ပါတယ်။ adzuki ခဲ့တာအပြင်, yoken ပုံမှန်အားဖြင့်သကြားနဲ့ agar-agar (ဂျပန်ဂျယ်လီ) ၏ထွက်ကိုဖန်ဆင်းသည်။ အပိုပါဝင်ပစ္စည်းများထိုကဲ့သို့သောအစိမ်းရောင်လက်ဖက်ရည်, ပန်းပွင့်ထုတ်ယူ, စိတ်ပျက်အခွံမာသီး, အသီး, သင်္ဘောသဖန်းသီးမွှေးအာလူးအဖြစ်စိတ်တွင်တိကျသောရာသီသို့မဟုတ်အတွေ့အကြုံများနှင့်အတူထည့်သွင်းနိုင်ပါသည်။ တချို့က yokan အရက်ဆိုင် adzuki ပဲမျိုးစုံနှင့်ဖွဲ့နှင့်တစ်ဦးပိုမိုပေါ့ပါးအရောင်ရှိသည်မဟုတ်နေကြသည်။ အဆိုပါအနိမ့်အဆီနှင့်မြင့်မားသောသကြားအကြောင်းအရာတစ်ခုစွမ်းအင်ဘားအဖြစ်ကပြီးပြည့်စုံသောစေသည်အတိုင်းဤချိုမြိန်တက်ကြွလူများအတွက်အထောက်အကူဖြစ်စေစဉ်းစားသည်။
•Zengetsu: Zengetsu ရက်လကိုဆိုလိုသည်။ ဒါဟာတစ်ဦး adzuki bean ကိုနှင့်ရည်ငါးပိအဆာနှင့်အတူမုန့်ညက်နှင့်ကြက်ဥကနေဖန်ဆင်းတော်တစ်ခေါက် pancake ဖြစ်ပါတယ်။ ထိပ်ပေါ်မှာရည်ဟာ zengetsu လထံမှထွက် peeking သောမိုဃ်းတိမ်ကိုစီးသင်္ကေတလို့ယူဆတယ်ဖြစ်ပါတယ်။ တချို့ကထုတ်လုပ်သူမွှေး၏အရသာမှကိုထည့်သွင်းဖို့ဂျင်းတို့ပါဝင်သည်။
ကတစ် sugary အရသာကိုအလေးပေးထားတဲ့အနောက်တိုင်းသကြားလုံးနဲ့မတူဘဲဖြစ်သကဲ့သို့သငျသညျ wagashi မြည်းစမ်းအဆိုပါပထမဦးဆုံးအကြိမ်, သင်ကပုံမှန်မဟုတ်သောရှာတွေ့လိမ့်မည်။ Wagashi များသောအားဖြင့်ပိုပြီးအရသာများနှင့်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံရှိသည်။ ငါးအာရုံအပေါ်အဓိကထားရသော wagashi အစာစားသည့်အခါဤတွင်အနည်းငယ်ထောက်ပြကြသည်။
1.ပထမဦးစွာအသံသင့်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့ကြိုးစားပါ။ သငျသညျအစာစားနေသောချိုမြိန်၏နာမကိုအထဲကရှာတွေ့ဖို့ကြိုးစားပါ။ အတော်များများကထိုကဲ့သို့သော miyo အဖြစ်ကဗြာဆနျအမည်များကိုအဘယ်သူမျှမ Haru (ရေရှည်တည်တံ့သောငြိမ်းချမ်းရေး), kogane giku (နေရောင်ယစ်မူး chrysanthemum) သို့မဟုတ် goshiki Ito (ငါးအရောင်ဟာ Thread) ရှိသည်။
2.Next ကိုမျက်မှောက်၏အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ wagashi ပေါ်နှင့်အတွင်းပုံသဏ္ဍာန်, အရောင်နှင့်ဒီဇိုင်းများကိုသတိပြုပါ။ ပုံမှန်အားဖြင့်ဤသူဂျပန်သဘာဝဒါမှမဟုတ်တချို့လမ်းအတွက်လက်ရှိရာသီဆိုလို။ သမိုင်းကြောင်းအကဤဂျပန်စာပေ, ပန်းချီ, ချည်မျှင်နှင့်အထည်ခန့်စာဖြင့်ရေးသားခဲ့ကြသည်။ အချို့သောအခြားခေတ်မီချက်ပြုတ်နည်းပညာများကိုနှင့်ခေတ်ရေစီးကြောင်းထည့်သွင်းသော်လည်းဤအသမိုင်းဝင်အစဉ်အလာ, ယခုအဆိုပါ wagashi ဒီဇိုင်းများကိုသြဇာလွှမ်းမိုး။
3.wagashi တစ်ဖဲ့ကိုရခြင်းယူပြီးတဲ့အခါမှာတဦးတည်းခံစားရအဆိုပါစိုထိုင်းသောသို့မဟုတ်ပြတ်သားထိတွေ့၏အဓိပ္ပာယ်အားဖြင့်ကောက်ယူနေပါတယ်။ အတော်များများကထုတ်လုပ်သူလက်တော်နှင့်ပါးစပ်နှင့်အတူအာရုံဖန်တီးနိုင်အောင်ကြိုးစားပါ။ တချို့က wagashi အနောက်တိုင်း confectionery ရန်အလွန်ကွဲပြားခြားနားသောအရာအတော်လေးပျော့ပျောင်းနှင့်ပျော့ဖြစ်ကြသည်။ အဆိုပါကွဲပြားခြားနားသောဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံကလတ်ဆတ်တဲ့နှင့်မြင့်မားသောအရည်အသွေးပါဝင်ပစ္စည်းများနှင့်ဖွဲ့ကြောင်းကိုညွှန်ပြသင့်ပါတယ်။
4.အတော်များများကဂျပန်သကြားလုံးတစ်ဦးနူးညံ့သိမ်မွေ့သောအမွှေးအကြိုင်ရှိသည်။ အဆိုပါ wagashi အတွက်သဘာဝပါဝင်ပစ္စည်းများအနံ့၏ subtlest ဖန်တီးလွှမ်းမိုးသောဖြစ်ခြင်းမရှိဘဲသင်၏အာခေါင်ကိုတိုးမြှင့်သင့်ပါတယ်။ အများဆုံး wagashi လက်ဖက်ရည်နှင့်အတူတာဝန်ထမ်းဆောင်နေကြသည်နှင့်ဤအတွေ့အကြုံကိုဖြည့်ရန်ရည်ရွယ်နေကြလို့ဖြစ်ပါတယ်။ သငျသညျသေးငယ်တဲ့ကိုက်ယူကြပြီတခါတချို့က wagashi အမွှေးနံ့သာပိုမိုအားကောင်းဖြစ်ကြသည်။
5.နောက်ဆုံးအနေနဲ့အရေးကြီးဆုံးအရသာ၏အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပါတယ်။ အချို့သော wagashi, sugary ချိုမြိန်ထက်အရသာအတွက်ဌာပနာမုသို့မဟုတ်ခါးသီးကပို savory ဖြစ်ကြောင်းကိုပြင်ဆင်ရမည်။ ခြုံငုံအရသာလွင်ပြင်မဟုတ်ပါဘူးနေစဉ်, အရသာလည်းလွှမ်းမိုးသောဒါပေမယ့်သိမ်မွေ့ဖြစ်ဖို့ရည်ရွယ်ခြင်းမရှိပါ။ ကိုသတိရပါဒီဂျပန်လက်ဖက်နှင့်အတူခေါ်ဆောင်သွားခံရဖို့ဖြစ်တယ်, အနည်းငယ် sips ပြီးနောက်, သင် wagashi အပြောင်းအလဲများကို၏ aftertaste ကြောင်းသတိထားမိပေမည်။ အရသာမြည်းဖို့သေးငယ်တဲ့အကိုက်အတွက်ချိုမြိန်စားရန်ကြိုးစားပါ။
6.သင်ကအကြိုက်ဆုံးချိုမြိန်ပထမဦးဆုံးအကြိမ်ပတ်ပတ်လည်ကိုမတှေ့နိုငျသညျ။ နှင့်ကြောင့်ထိုသို့ယခုနှစ်ဘယျအခြိနျအချို့အပြောင်းအလဲ – wagashi ၏ဂုဏ်အသရေဤမျှလောက်များစွာသောအမျိုးအစားများ, အရသာများနှင့်ဒီဇိုင်းများကိုမှရွေးချယ်ဖို့ရှိတယ်လို့ပါ! သငျသညျအကောင်းဆုံးသင်နှင့်သင့်လက်ဖက်ရည်ကိုက်ညီတရှာတွေ့မှီတိုင်အောင်ရှာဖွေထားပါ။
1.သင်ဂျပန်နေထိုင်ကြသည်မဟုတ်ခဲ့လျှင်များစွာသောအာရှအစားအစာအတန်းမှာသို့မဟုတ်အစားအစာစတိုးဆိုင် wagashi သကြားလုံးသယ်။ သငျသညျဂျပန်သွားရောက်ကြည့်ရှုဖို့အခွင့်အလမ်းရဖို့ပြုလျှင်, သင်နီးပါးတိုင်းအစားအစာ store မှာ wagashi ရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်။ Selected ကဖေး, စတိုးဆိုင်များ, ဘုရားကျောင်းနှင့်အစားအစာကိုလည်းလူသိများဖြစ်ကြောင်းအထူးပြုသကြားလုံးရောင်းဆိုလိုတာပါ။ သူတို့ရဲ့ wagashi ကြောင့်အထူးရာသီသို့မဟုတ်အခမ်းအနားဖို့ဒါမှမဟုတ်သူတို့အသုံးပြုတဲ့ပါဝင်ပစ္စည်းများ၏, သမိုင်းကြောင်းတစ်ဦးသတ်သတ်မှတ်မှတ်ဒေသတွင်း၌ဖန်ဆင်းခဲ့ကြလို့ဖြစ်ပါတယ်။ သငျသညျဂျပန်များ၏ဒေသအများအပြားတွင် wagashi အချို့ကိုမူထူးခြားတဲ့ခဲဘွယ်စားဘွယ်ကိုမြည်းစမ်းလိုလျှင်သင်အချို့သောနယ်လှည့်လုပ်ဖို့ရပါလိမ့်မယ်။
2.wagashi သကြားလုံး၏ကြီးမားသောအကွာအဝေးသည်လူသိအများဆုံးတည်နေရာ Asakusa တိုကျိုမှာရှိတဲ့ Nakamise စျေးဝယ်လမ်းဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ Sensoji ဘုရားကျောင်းအပြင်ဘက်တွင်ဤသည် 250 မီတာစျေးဝယ်လမ်း 17 ရာစုကတည်းကန်းကျင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
3.wagashi ၏စျေးအကြီးဆုံးအမှတ်တံဆိပ်၏တစ်ခုမှာ Toraya ဖြစ်ပါတယ်။ သငျသညျတိုကျိုနှင့်ကျိုတိုတွင်ဤချိုမြိန်စျေးဆိုင်ကိုရှာပါ။ ဤသည်အမှတ်တံဆိပ်ကိုတည်ထောင်သူ, Enchu Kurokawa အဖြစ်ရှည်လျားသောသမိုင်းရှိပါတယ်, Empress Meisho အပါအဝင် nobility မှ wagashi သကြားလုံးဝတ်ပြုကြ၏။ အဖြစ်ဝေးကျော 1635 အေဒီအဖြစ်ရက်စွဲပါမှတ်တမ်းများ Enchu သူကျိုတိုမှာရှိတဲ့များသည်မင်းမျိုးအနွယ်ဝင်မှရောင်းမယ်လို့သကြားလုံး၏နှစ်ဆယ်အမျိုးအစားများခဲ့ပြသပါ။
4.wagashi အတွက်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်စားဖိုမှူးအဖြစ်ယူဆခံရဖို့အလို့ငှာ, သငျသညျတဆယ်နှစ်လုံးကိုနှစျကျြောလေ့လာဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ ဤအသကြားလုံးကိုဖန်တီးရန်လိုအပ်သည့်ကွဲပြားခြားနားသောပါဝင်ပစ္စည်းများနှင့်နည်းစနစ်အကြောင်းသင့်ကိုဆုံးမသွန်သင်လိမ့်မည် wagashi ကျောင်းများရှိပါသည်။
5.ကျိုတိုမှာရှိတဲ့ Toraya ပြခန်း wagashi များ၏သမိုင်းတစ်ဦးပြတိုက်ဖြစ်ပါတယ်။ မသာပန်းချီကားများနှင့်မှတ်တမ်းများကွဲပြားခြားနားသောသကြားလုံးမှတ်တမ်းတင်, ဒါပေမယ့်လည်းတန်ဆာနှင့်ထုပ်ပိုးပစ္စည်းများဂျပန်ရဲ့သမိုင်းတစ်လျှောက်လုံးနှင့်ကွဲပြားခြားနားသောဒေသများရှိပါသည်။ ဆုံးစိတ်လှုပ်ရှားစရာပြသမှုခေတ်ကာလတစ်လျှောက်လုံး wagashi ဒီဇိုင်းနှင့်ပါဝင်ပစ္စည်းများအတွက်အပြောင်းအလဲများကိုပြသသောသူတို့အားဖြစ်ကြသည်။ အဘယ်အရာကိုနိုင်အောင်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ဖြစ်ပါတယ် display ကိုပေါ်သကြားလုံးမော်ဒယ်များပေမယ့်အစစ်အမှန်သကြားလုံးမဟုတ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ အဆိုပါသကြားလုံးမရှိတော့ display ကိုအပေါ်နိုင်ပါတယ်အခါပြတိုက်၏မှူးနေ့တိုင်းနှင့်အမိန့်တဖန်သူတို့ကိုမ check လုပ်ပေးပါတယ်။
6.ဒီချိုမြိန်၏ပထမစားဖိုမှူးနေသောဂျပန်ဗုဒ္ဓဘာသာဘုန်းတော်ကြီးများအဘို့မဟုတ်ခဲ့လျှင်Wagashi အလွန်ကွဲပြားခြားနားသောပါပြီနိုင်ဘူး။ တရုတ်နိုင်ငံသို့သွားရောက်ခဲ့သည်သူသံဃာတော်များအသားကိုစားရန်တားမြစ်ထားခြင်းနှင့်အစောပိုင်းသကြားလုံး၏တရုတ်မူကွဲငါးများနှင့်အခြားတိရစ္ဆာန်များ၏အသည်းပါဝင်သည်ခဲ့ကြသည်။ သူတို့ကယနေ့အများဆုံး wagashi သကြားလုံးတွင်ထည့်သွင်းထားတဲ့ adzuki bean ကိုငါးပိမှစာရွက်ပြောင်းလဲသွားတယ်။
7.wagashi ကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူးများရှိသည်ဟုယုံကြည်နေသည်စားသုံးခြင်းဂျပန်မှာတော့။ ကနည်းပါးလာလုပ်ငန်းများ၌ပါဝင်ပစ္စည်းများရှိပါတယ်အဖြစ်ဤသကြားလုံးအောက်ပိုင်းကယ်လိုရီနှင့်အနည်းငယ်သာသကြားရှိသည်။ အတော်များများလည်းမဆိုအဆီရှိသည်နှင့်ပရိုတိန်းအပြည့်အဝရှိပါတယ်ပါဘူး။ သငျသညျ adzuki bean ကိုငါးပိဖြင့်လုပ်သော wagashi ကိုစားလျှင်, ပဲမျိုးစုံ, သင့်သွေးဖိအားကိုလျှော့ချကူညီပင်ပန်းနွမ်းနယ်ကနေအစာခြေခြင်းနှင့်အကူအညီပြန်လည်နာလန်ထူမြှင့်တင်ရန်ဆိုသည်။
8.သင့် wagashi သကြားလုံးစားရန်စီစဉ်သည့်အခါသငျသညျကိုမသောက်လက်ဖက်ထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်ပါတယ်။ ထူးအိမ်သင်လက်ဖက်ရည်သို့မဟုတ် usucha Higashi တူသောခြောက်သွေ့သောသကြားလုံးနှင့်ယစ်မူးဖြစ်သင့်သည်။ ထူလက်ဖက်ရည်သို့မဟုတ် omogashi စိုထိုင်းသော wagashi အတူသောက်ရပါမည်။ ဒါကလက်ဖက်ရည်သေချာနှင့် confectioneries တစ်ဦးချင်းစီကတခြားဖြည့်စွတ်ရန်ဖြစ်ပါသည်။
9.စျေးအကြီးဆုံးသကြား suiko wasambonto သကြားလို့ခေါ်ပါတယ်သော်လည်းWasambonto သကြားတစ်ဦးက high-quality ပစ္စည်းဖြစ်ပါတယ်။ Empress Suiko ဒီသကြားရန်သူမ၏အမည်အားအပ်ပေးတော်မူ၏အဖြစ်ဤသကြားမူပိုင်မှဆက်ဆံရေးရှိပါတယ်။ သူမသည်တစ်ဦး Empress အရွယ်မရောက်အဖြစ် 7th ရာစုအတွင်းနန်းထိုင်၏။
10သူတို့ဂျပန်တီဗီရှိုးတွင်စားခဲ့ကြသောကြောင့်, wagashi ၏အတော်များများအမျိုးအစားများကိုဂျပန်နှင့်ပင်လယ်ရပ်ခြားလူကြိုက်များဖြစ်လာကြပါပြီ။ Dorayaki Doraemon, တစ်စက်ရုပ်ခွေးသူပေါ်ပြူလာ anime ဇာတ်ကောင်များ၏အကြိုက်ဆုံးရေစာဖြစ်ပါတယ်။ Ando Natsu ပြင်သစ်စားဖိုမှူးတစ်ဦး wagashi အလုပ်သင်ဖြစ်လာရတဲ့ဒရာမာစီးရီးဖြစ်ပါတယ်။ Nagisa Clannad အတွက် dango ချစ်သောသူတစ်ဦး anime ဇာတ်ကောင်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာအားလုံးချိုမြိန်သည့် dango အကြောင်းကိုအဆုံးခရက်ဒစ်ကာလအတွင်းအလွန်ချစ်စရာသီချင်းရှိပါတယ်။ တစ်ဦးအချည်းနှီးသောအစာအိမ်နှင့်အတူထိုအရှိုးမဆိုမကြည့်ပါနဲ့!